Meelaha Ganacsiga ee hadda FXCC
Home / Trading / Qalabka Forex / Meelaha ganacsiga ee hadda jira
Qalabka Hawlgallada Hantidhaw Ee Hadda
Xilliga Suuq-Ganacsiga (CTP) waxay bixisaa macluumaad ku saabsan lixlabaad lacag ah iyo boos dahabi ah. Calaamadaha ganacsiga ee la socda iibka / iibsiga danta ayaa la isku darayaa si loo helo khariidadaha xisaabinta. Macluumaadkan waxaa la cusbooneysiiyaa dhowr jeer inta lagu jiro kulannada ganacsiga oo leh jadwalka cusub ee la cayimay. Xaaladaha si toos ah ayaa loo xaqiijiyaa daqiiqado kasta oo 15 kadibna laga tirtiro nidaamka marka lagu shubo dhaqdhaqaaqa suuqa.
CTP sida a Qalabka Madaxbannaan
Iyada oo macaamiishani ay macaamiishayadu ka faa'iideysan karaan macluumaadka la qaban karo; macaamiishu waxay heli karaan tilmaam ku saabsan tilmaamaya muujinaya heerarka qiimaha, sida, celceliska iibsashada iyo celceliska iibiya qiimaha. Xogta waa sax; waxaa la ururiyey oo la sii daayay iyada oo aan ku dhawaqnayn daabacaadda talooyinka ganacsiga.
CTP waa qayb ka mid ah isku darka
Tijaabadani waxay caddayn kartaa aalad aad u faa'iido leh marka lagu daro falanqaynta taageerada iyo iska caabinta. Mowduucyada la soo sheegay iyo iibsashada / iibinta danaha waxaa laga qaadaa lataliye ganacsi oo leh dhagaystayaal badan oo ka jawaab celinaya heerarkaas, sameynta heerarka qiimaha xitaa kalsooni badan.
Qalabkani waa la heli karo iyada oo loo marayo Hubka Ganacsiga ee haysta xisaabaadka FXCC.
Goob Ganacsiga Hadda